Rohingya Students Forum: January 2016
ငါ့ ​အာရ်ကာန် ရွှေ​မြေကြီး
ရေးသူ - မိုဟာမတ်ဇူဘိုင်ရ်
ရင်​ထဲနာကျင်​ တဆစ်​ဆစ်​ပဲ ...
အို…ငါ့ ​အာရ်ကာန် ရွှေ​မြေကြီး...။
- ငါတို့အသက် ပုရွက်ဆိတ်လို
- ဒီမြေမှာမွေး ဒီ​ရေကို​သောက်​ ​
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ ကျောင်သားတွေကို ဒက္ကားတက္ကသိုလ်က ထုတ်ပယ်
နိရဉ္စရာ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ကျောင်းသား ခုနှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒက္ကားတက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တွေက ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံက မတရားအသင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် အဖွဲ့ Hizb ut-Tahrir ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ Bd news24 မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ တွေဟာ ဒက္ကားတက္ကသိုလ်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်နဲ့ စီးပွားရေး ဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး Hizb ut-Tahrir အဖွဲ့ရဲ့ လက်ကမ်းစောင်တွေ ဖြန့်ဝေနေတာကို CCTV ကင်မရာကတစ်ဆင့် ရိုက်ကူးထားတာကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဒက္ကားတက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တွေက ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြားကျောင်းသား ကိုးဦးကိုလည်း တစ်ခြား မတော်မရော် လုပ်မှုတွေနဲ့ ကျောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Rohang king at 1:13 AM
"ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကို ပုဒ်မ ၄ခု ဖြင့် စွဲချက်တင်"
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် အုတ်တံတိုင်းတွင် အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် စာသားများ မှုတ်ဆေးဖြင့်ရေးသားမှုဖြင့် မန္တလေးခရိုင်ဗကသအတွင်းရေးမှုးကိုရဲရင့်ပိုင်မှုးကို ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် အမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးက စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ(တတိယနှစ်)ကျောင်းသား ကိုရဲရင့်ပိုင်မှုးကို ရတနာပုံတက္ကသိုလ် အုတ်တံတိုင်းနံရံတွင် အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် စာသားများ မှုတ်ဆေးဖြင့်ရေးသား မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီ တန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာပုဒ်မ ၁၈၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅တို့ဖြင့် အမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးက ယနေ့( ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ) တတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်တွင် စွဲချက်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ-ချမ်းဇော်အောင်7Day
Posted by Rohang king at 1:07 AM
------- ၂၀၁၆ နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲ -------
** ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းလခ နှင့် ပညာထောက်ပံ့ကြေးများ ပညာရေးပြပွဲ သို့လာရောက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ **
နေရားဆီဒိုးနားဟိုတယ် ရန်ကုန်၊ မင်းတုန်းခန်းမ ( ဒုတိယထပ်)။
နေ့ ရက်းဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၆။
အချိန်းညနေ ၃ နာရီ မှ ၅ နာရီ အထိ။
ပေးထားသော link ကို နှိပ်ပြီး ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပါ။ https://www.surveymonkey.com/r/studyoverseas2016
ISG ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု အေဂျင်စီသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံမှ ကျောင်းပေါင်း ၂၂၀ ကျော်နှင့် ချိတ်ဆက် ထားသည်။
အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုပါက ဖုန်း 01 544 034 , 09 253684928 (သို.)
- ဆီဒိုးနားဟိုတယ် (၄) လွှာ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀) Business Suites။
- ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ ( တာဝါ A)၊ (၃) လွှာ၊ အခန်းနံပါတ် ( ၁၁၁)၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ၇၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့့သို.ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို. ရုံးခန်းသည် တနလာင်္နေ့ ကနေ စနေနေ့ အထိ မနက် ၁၀း ၃၀ ကနေ ညနေ ၆း ၃၀ အထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို အခမဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျောင်းလျှောက်လိုသောကျောင်းသူကျောင်းသားများ မူရင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မူရင်းဆယ်တန်းအောင် လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်း အင်္ဂလိပ်လို နှင့် မြန်မာလို ( ဘွဲ့ ကြိုတန်းအတွက်) ၊ မူရင်းဘွဲ့ လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်း ( ဘွဲ့ လွန်တန်းအတွက်)တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာပါရန်။
----Overseas Education Exhibition 2016!-----
**Grants and Scholarships are also available for International Students. Come to our exhibition to enquire more!**
Where: Sedona Hotel Yangon, Mindon Room (2nd Floor).
Please register at this link: https://www.surveymonkey.com/r/studyoverseas2016
ISG represents more than 200 Universities in 10 different countries.
Call us at + 95 1 544034 or + 959253684928 for more information.
- Sedona Hotel Yangon, Business Suites #04-10. Yangon.
- Diamond Plaza (Tower A), Level 3, No.111. Between 33 x 34 Street, 78 Street Chan Aye Thar Zan Township. Mandalay.
NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ပညာ ရေး စနစ် များပြောင်းလဲတော့မည်
၂၀၁၆ ၂၀၁၇ တွင် ၁၀ တန်း မေးခွန်း ပုံစံပြောင်းမှာဖြစ်ပြီး ၄ တန်း ၈ တန်း ကုစား မ ရှိတော့ဘဲ ကျက်ဖြေ စနစ် ပ ပျောက် အောင် ဇန်န ဝါ ရီလ ၂၂ ရက် နေ့ ရက်စွဲ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ရေးဆွဲလိုက်သည်
Posted by Rohang king at 8:43 AM
တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဆော့ဝဲမှတဆင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ခိုးယူမှု
ဒီ app များက မိမိကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေကိုလျို့ဝှက်စွာ ခိုးယူနေတာ
အဲဒီ app တွေအားလုံးဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကြေငြာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Youmi ကို app ထဲမှာ ကြော်ငြာဖော်ပြခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကုမ္ပဏီက သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ လျို့ဝှက် သိမ်းယူနေတာခဲ့ပါတယ်။ Apple မှ ဒီ app တွေအားလုံး ဖယ်ရှားခဲ့ပေမယ့် developer သစ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ မကြာခင် restore ပြန်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ သို့သော် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဖို့ အကယ်၍ အောက်ပါ app တွေ သင့်ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေသေးပါက uninstall လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
Posted by Rohang king at 8:34 AM
Ceér fúni baçí baçí
áñçer Dada guza di
Dadar háttor íba ki
Iba oilde bañcór laçi
Iba loi gorédé ki
Íba dóri aññi áñçi
Bazarot gile teillor goçi
Foñté foñté borói fari
Soól ore hábai fata fari
Háf bissú re bari mari
Górot gile duwaror bari
Tái tái tuáñr dadi ré mari.
1. áñçi = လမ်းလျှောက်သည်။
2. baçí = တိုတို။
3. Bañcór = ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော။
4. bari = ရိုက်ချက်။ တံခါးပိတ်တုတ်။
5. bari mari = ရိုက်သည်။
6. bissú = ကောက်မြှီးကောက်။
7. borói = ဆီးသီး။
8. Ceér = တေးကဗျာ။
9. Dadar = အဘိုး၏။
10. dóri = ကိုင်လျက်။
11. duwar = တံခါး။
12. fari = ဆွတ်ခူးသည်။
13. Fata = သစ်ရွက်။
14. Foñt = လမ်း။
15. gilé = သွားလျှင်။
16. goçi = ထမ်းပိုး။
17. guza = ခါးကုန်း။
18. hábai = ကျွေးမွေးသည်။
19. Háf = မြွေ။
20. íba = ဤဟာ။
21. laçi = တံပိုး။ တုတ်။
22. Soól = ဆိတ်။
23. Tái-tái = တစ်ခါတစ်ရံ။
Posted by Rohang king at 9:04 AM
By Rohang Lay
Dóon Diya Allahr hoto douñr,
Beil, san or túaró becí foór.
Fali kérmos de aró ador,
Úff nogore zibon bór.
Zadur mug saái duk foura,
Gom gán hábai adob cíka.
Bála gánór raásta dehá,
Elom forai manuic bana.
Oli didi vukot bazái hait,
Dui sug kuula guñra rait.
Fut-ziír sinta gorát tái,
Nizor aram-or forba nái.
Zúf-hom nogoré honó otté
Golti házar maf goré.
Vukot báceér raham-or doriya
Tánda sáiya bándali maá.
1. adob = ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တ။
2. ador = အချစ်။
3. aram = ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်ခြင်း။
4. báceér = မျောနေသည်။ စီးဆင်းသည်။
5. bándali = အကြင်နာဆုံး။
6. Dóon = စည်းစိမ်းဓန။
7. doriya = သမုဒ္ဒရာ။
8. Elóm = ပညာ။
9. forba = ဂရုစိုက်သည်။
10. Golti = အပြစ်။
11. honó otté = မည်သည့်အခါမှ။
12. kérmos = ပြုစုစောင့်ရှောက်သည်။
13. kuula = ဖွင့်နေသည်။
14. maf = ခွင့်လွတ်သည်။
15. Oli = ကလေးတို့ကို အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် ပုံပြင်၊ တေး၊ ကဗျာ စသည်တို့ ဆိုပြသည်။
16. sáiya = အရိပ်။
17. Tánda = အေးမြသော။
18. Úff = ဒုက္ခခံရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ညည်းညူးသံ။
19. Zadur = ကလေးကို ချစ်စနိုးခေါ်သည်။
20. zibon bor. = တသက်ပတ်လုံး။
21. Zúf-hom = ကျောသားရင်သားခွဲသည်။